Fianarantsoa: Otrikarena azahoana angovo ny volobe na bambou
mercredi, 06 décembre 2017 21:47
Manomboka ny tapaky ny janoary 2018 ny famokarana herinaratra avy amin'ny bambou eto Madagasikara. Fantatra tao anaty atrikasa fanofanana olona hisehatra amin'ny fambolena volobe tanterahina eto Fianarantsoa izany vaovao izany.
Ao Tongarivo, Tanjombato Analamanga no hametrahana io taozava-baventy fanodinana ny vokatra bamabou io. Izany dia isan'ny lalam-pihariana azo trandrahina amin'ny alalan'ny fambolena azy ankoatry ny fanamboarana fanaka, taotrano, lamba sy ny maro hafa.
Hatreto dia 157ha no tany novolena bambou iarahana amin'ny tetikasa PROSPERER eo ambany fanohanan'ny INBAR (International Network for Bamboo and Rattan). Misandrahaka amin'ny faritra 9 (Analamanga, Itasy, Matsiatra Ambony, Antsinanana, Analanjirofo, Boeny, Bongolava, Soafia ary Vatovavy Fitovinany) ny fampiroboroboana izany ankehitriny raha faritra roa no natao andrana tamin'ny dingana voalohany.
Tanterahina mandritra ny telo andro ny fanofanana eto Fianarantsoa. Voasolontena avokoa ny faritra 9 voakasiky ny tetikasa.
Jorofo: Tsy mena-mitaha ny Faritra Atsimo Atsinanana
Tourisme: Les bateaux de croisière ont repoussé à début 2018 leur touchée à Madagascar »
generic viagra with overnight delivery 20 mg tadalafil best price buy cialis discount generic viagra canada no prescription pharmacy india 4 pharmacy levitra cheap Canadian Pharmacy Online generic cialis healthy men viagra maxifort 50 mg